रविको थुनछेक बहस जारी : बहसबाट लाग्नेछ थुनामा बस्ने, धरौटीमा रिहाहुने वा साधारण तारेखको टुंगो
तर अदालतले दिएको ५ दिनको समय हिजो नै पूरा भएपनि सार्वजनिक विदा भएकाले आज अदालत पेश गर्न लागेको हो ।
काठमाडौंका नदीको फोहोर उस्तै, सफा गर्ने नाममा सकियो ७ अर्ब (भिडियो)
काठमाडौं– स्वच्छता मेरो पहिचान, सफाइ मेरो योगदान भन्ने मूल नाराका साथ बाग्मती सरसफाइ महाअभियानको शुरु भएको ३ सय २४ हप्ता वितेको छ । यो बीचमा बाग्मती सफा भएको सन्देश दिन राष्ट्रपति देखि प्रधानमन्त्री सम्मले बाग्मतीमा जलयत्रा अथवा स्नान गरिसकेका छन् । बागमती सफाई सँगसँगै उपत्यकाका अरु नदिमा समेत सफाई अभियान चलेको छ । तर कुनै पनि नदिको स्वरुप आजसम्म फेरिएको छैन ।
टेकुपुल बनाउन खर्चिएको १४ करोड बालुवामा पानी! (भिडियो)
काठमाडौं–चिनियाँ कम्पनी जेआईइसी र पप्पु कन्स्ट्रक्सनले मिलेर बनाएको टेकु–कालिमाटी जोड्ने पुल तयार भएको १४ महिना बित्यो ।
२० करोडको ठेक्का सम्झौतामा बनेको यो पुल बनाउने ठेकेदारले करिव १४ करोड बुझिसकेको छ तर रंग रोगन भईसकेको पुल निमार्ण सम्झौता विपरित् रहेको भन्दै सरकारले पुल सञ्चालनमा ल्याएको छैन ।
मौलिकतामा संकट निम्त्याउने गरी सम्पदा बनाउन किन आयो विदेशी प्रविधि ?
काठमाडौं–२०७२ सालको विनासकारी भूकम्पले भत्किएका नेपालका पुराना मठ–मन्दिर, देवल, सत्तल तथा दरवार पुर्ननिमार्ण निकै सुस्त भईरहेका छन् । ठूलो लगानी, लगनशिलता, सीप र सिर्जना मिसाईनु पर्ने यस्ता धेरै सम्पदा अहिले विभिन्न मुलुकको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बनिरहेका छन् ।